Mogadishu Journal » QM oo digniin kasoo saartay halista ka dhalan karta Abaarta Soomaaliya
Mjournal :-Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in (Shan milyan iyo afar boqol oo kun) oo Soomaali ah oo ay saameyeen abaaro sii xumaanaya oo ka jira Soomaaliya ay halis ugu jiraan in bisha soo socoto ay wajahaan cunto yari aad u daran, haddii aanan si deg deg loo helin gargaar naf badbaadin ah.
Hay’addu waxa ay sheegtay in abaarahaan oo la xiriira dhinaca cimilada ay yihiin kuwo kusoo laab laabtay Soomaaliya ,tani ayaa sii murjineysa xaalada nololeed ee mallaayin qof oo ay mar hore soo barakiciyeen colaada gaamurtay ee ka taagan Soomaaliya.
Musiibadan ayaa imaaneysa xilli ay Soomaalida bilaabeen inay kasoo kabtaan saameyntii ay ku reebtay abaar socotay mudo laba sano ah taas oo soo dhamaatay sanadkii 2017,abaartaas ayaa waxaa ay ku qasabtay inay guryahooda ka cararaan in ka badan hal Milyan oo qof si ay u raadsadaan Cunto,biyo iyo Shaqo.
UNHCR ayaa ku warantay in abaarta hadda ka jirta Soomaaliya ay ilaa iyo hadda ku barakaceen dad gaarayaa 50 Kun oo Ruux.
Afhayeen u hadlay Hay’addani oo lagu Magacaabo Bieber Bloch ayaa sheegay in cunta yarida ay mar hore bilaabatay,isaga oo ka digay in waqtiga uu aad u yaryahay si loo gaaro dadka ay saameysay abaarta, waxaana uu intaasi raaciyay in Bisha soo socota ay xaalada aad uga sii dari karto.
Sidoo kale waxa uu sheegay in xaalada (laba milyan iyo laba Boqol oo qof oo kun) oo Soomaali ah ay hadda la liitaan gaajo una baahan yihiin cunto iyo gargaarBani’aadanimo oo deg deg ah.